Kooxda Chelsea Oo Ciyaartay Muhiim Ah Kala Soo Wareegi Doonta Kooxda Manchestara Saacadaha Soo Socda - Wargane News
Home Sports Kooxda Chelsea Oo Ciyaartay Muhiim Ah Kala Soo Wareegi Doonta Kooxda Manchestara...
Kooxda Chelsea Oo Ciyaartay Muhiim Ah Kala Soo Wareegi Doonta Kooxda Manchestara Saacadaha Soo Socda
Chelsea ayaa la warinayaa inay ka shaqeynayso sidii ay Manchester United uga soo qaadan lahayd Anthony Martial.
Jariiradda The Times ayaa qortay in Blues ay wiilka reer France u aragto badelka Eden Hazard.
Eden Hazad ayaa aad u doonaya inuu ka tago gegada Stamford Bridge si uu ugu biiro kooxda Real Madrid taa oo dhawaan waysay xiddigeeda ugu muhiimsanaa ee Cristiano Ronaldo oo ku biiray Juventus.
Blues ayaa durba sii bilowday baadi goobka booska kabtanka Belgium waxayna doonayaan xiddiga Red Devils ee Martial kaa oo sidoo kale muujiyay rabitaankiisa ku aadan inuu ka soo tago qalcada Old Trafford.
Kooxda Jose Mourinho ayaa Martail ku qiimeysay adduun dhan 100 milyan oo euro oo u dhiganta (89 milyan oo Euro/117 milyan oo Doolar).
Camaaliqada Jaramalka Bayern Munich ayaa sidoo kale dooneysa da,yarka reer France, balse kooxda reer London ayaa aaminsan inay Martial ku soo xero galin karaan lacago ka yar Qiimaha ay sheeganeyso Manchester United.
Somalia: Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay wada hadallada Itoobiya iyo ONLF uga soconaya Kenya